त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शौचालयमा पनि ठगिन्छन् बिरामी - Everest Dainik - News from Nepal
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शौचालयमा पनि ठगिन्छन् बिरामी
काठमाडौं, भदौ १९ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचार गराउन गएका बिरामी र आफन्त शौचालय प्रयोगमा समेत ठगिने गरेका छन् ।
बिरामी र आफन्तले शौच गरेबापत रकम असुल्ने गरिएको छ । अस्पतालमा दैनिक १५ सय हाराहारीमा बिरामी जाने गरेका छन् ।
भिडभाड हुने स्थान (अस्पतालको उत्तर र दक्षिण)मा रहेका शौचालय बिरामीका लागि पासो बनेको चिकित्सकहरू नै बताउँछन् । अस्पतालका युरोलोजिस्ट प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवालीले सरकारी अस्पतालमा बिरामीले पिसाब र दिसा गरेको आधारमा रकम उठाउनु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए । ‘२० रुपैयाँको टिकट काट्न नसक्ने बिरामी पनि उपचारमा आउँछन् । उनीहरू पिसाबको ५ र दिसाको १० रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुन्छन्,’ उनले भने ।
याे पनि पढ्नुस घरजग्गा किनबेचमा राजस्व छलीः पुँजीगत लाभकरमा झनै डरलाग्दो बेथिति !
शौच गरेवापत बिरामीसँग पैसा उठाउने काम सरकारीमध्ये शिक्षण अस्पतालमा मात्रै भएको उनले बताए ।
आठगुना बढी असुली
अस्पतालले दुई कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति मासिक आठ हजार तलब दिएर शौच गरेबापत पैसा उठाउन खटाएको छ । पिसाब गरेको १ र दिसा गरेको २ रुपैयाँ भनेर बाहिर देखिने गरी टाँसिएको छ । तर, पैसा उठाउनेले पिसाब गरेको ५ र दिसा गरेको १० रुपैयाँ उठाउँछन् ।
याे पनि पढ्नुस फेसबुकमार्फत ३४ जनालाई ठगीसकेकी युवती प्रहरीको फन्दामा
रकम संकलन गर्न बसेका ध्रुव नेपालले ‘माथिको आदेशअनुसार रकम संकलन गरेको’ बताए ।
‘सुरुमा पिसाब फेरेको एक रुपैयाँ र दिसा गरेको दुई रुपैयाँ भनेर देख्ने गरी शौचालयमा टाँसेको थिएँ । पछि अस्पतालबाट मलाई स्पष्टीकरण सोधियो । त्यसैले अहिले ५ रुपैयाँ र १० रुपैयाँ लिन थालेको हुँ,’ उनले भने । –नयाँ पत्रिकाबाट
याे पनि पढ्नुस उपभोक्ता अधिकारको आडमा ठगी
ट्याग्स: thagi, tu hospital